I-roulette yengxoxo yevidiyo-unxibelelwano ngaphandle kwemida 24/7
I-roulette yengxoxo yevidiyo yindawoyasimahlaapho unokuncokolangokululanamantombazanakunye nabafana bemo eyahlukileyo yentlalo evela kumazwe ali-197 ehlabathi.Ukufumana i-interlocutor, akudingeki ukuba ushiye ikhaya lakho elipholileyo, kwanele ukuba ube nokufikelela kwi-Intanethi.
IwebhusayithiyeChatrouletteiphinda ivelise ingqikelelo yoqobo yenkonzo yanamhlanje yobuhlobo kunye nonxibelelwano ngaphandle kwemida yejografi okanye yobudala.Unokuthatha inxaxheba kwiingxoxo nangaliphi na ixesha losuku kwaye i-100% ifumane umntu ozonwabisayo.
Umgaqo wokusebenza kwe-roulette yevidiyo ye-intanethi
Uqhagamshelwano nabanye abasebenzisi lwenzeka ngokupheleleyo kwiseva yethu.Umthamo wayo unokumelana nokuhamba okukhulu kweendwendwe.I-roulette yengxoxo yevidiyoyenziwa kwi-intanethi, ngaphandlekobhalisooludekwayesimahla.Inkqubo ibonisa ividiyo yomsebenzisi kwaye ibonelela ngokufikelela kwikhamera yewebhu.
I-interlocutor ikhethwa ngokuzenzekelayo, olu luhlobo lwe "roulette yaseRashiya".Ukwenza oku, indlela yamanani angaqhelekanga isetyenziswa, emva koko uxhulumaniso lusekwe ngokuthe ngqo.Le teknoloji ayisebenzisi iiseva njengabalamleli.Ndiyabulela kule nto, akunakwenzeka ukufumana indawo yeendwendweze-roulette yengxoxo ye-intanethi.Inkonzo isebenzisa uphendlo olungakhethiyo, ibonelela ngonxibelelwano olufanayo, kwaye ayifuni ukukhuphela abaqhubi.
I-"plus" eyongezelelweyo yenkqubo kukuba akudingeki ukuba ufake nayiphi na ingcaciso yobuqu, awudingi ukuba ubonise "i-imeyile" okanye uze "negama lesiteketiso", zonke izenzo zenzeka emva kokuchofoza i-2. amaqhosha omsebenzi.
Kutheni ufuna i-roulette yevidiyo ngaphandle kokubhalisa?
Fumana abahlobo/obaziyo.Ukusebenza, ukufunda, ukuhlazeka kwe-banal akukuvumeli ukuba ufumane umhlobo wokwenene?I-roulette yengxoxo yevidiyo yithubalokuqala unxibelelwano lobuhlobokunye namantombazanaokanye amakhwenkwe ngaphandlekokubhalisa.Olu khetho lokufumana umhlobo lusebenza ngakumbi, kuba.ikuvumela ukuba ungathinteli isangqa kuphela koogxa bakho, abafundi ofunda nabo okanye obaziyo, kukho amawaka abagqatswa abaphambi kwakho.Kwimo engaziwa, kulula kakhulu "ukuvula", ukoyisa iintloni ezinokwenzeka kwaye ufumane umntu okuqondayo ngokwenene.
Fumana "soulmate" yakho.I-roulette yengxoxo yevidiyoikuvumela ukuba ungagcini njengokuqhelana ne-intanethikunyenentombazanaentleokanye indoda enesibindi, kodwa nokubaqonda ngexesha lencoko engenamda.Ithuba elimangalisayo lokufunda umnyulwa wakho ukusuka ku-"A" ukuya ku-"Z" phambi kwentlanganiso enokwenzeka ngaphandle kweintanethi.Kwisingqisho sobomi banamhlanje, indlela yokwenene yokufumana i-missus ikhawuleza kakhulu kwaye ilula kunelizwe lokwenyani.Ibhonasi eyongezelelweyo - "umhla" unokuphazamiseka nangaliphi na ixesha, uvalelisa kwisithandwa esithandanayo / intombi ngonaphakade.
Yazi abantu basemzini.Ingxoxo yevidiyoyinkonzoengenazithintelokwijografi yonxibelelwano, unokuthethasimahlakunye nomcimbi wemizuzwana kunye nabahlali bamazwe angabamelwane okanye angaphandle.Ukongeza, eli lithuba elihle lokufunda iilwimi zasemzini okanye uphucule izakhono zakho zokuthetha, ungasebenzisi iincwadi zezifundo okanye i-Intanethi, kodwa ngokuthe ngqo kwisithethi somthonyama.Ukongeza, ukuba unqwenela, unokuhamba uhambo, ukwazi ukuba kwilizwe elingaqhelekanga kukho umntu oza kudibana naye kwaye enze uhambo olungalibalekiyo.
I- Chatroulette yincokoyevidiyoekwi-intanethi yasimahla yokwazanaixesha elide okanye elifutshane, ngokunzulu okanye ngokulula ukuncwasa amakhwenkwe okanyeamantombazana.Ikwasetyenziswa xa ufuna nje ukuthetha nomntu kwaye ufumane inkxaso yokuziphatha.Ngokuqhelekileyo kulula ukulungisa imeko eethe-ethe ngoncedo lomntu ongamaziyo kunesizalwane.Ukungaziwa kukuqinisekisa ukuba unokuxoxa ngesihloko "esishushu" ngaphandle kokujonga iintloni.
Ungayiqala njani incoko yevidiyo ngaphandle kokubhalisa?
I-PC, ithebhulethi okanye ezinye izixhobo onokuqhagamshela kuzo ikhamera yewebhu;
ixeshalasimahla lokuncokola ngevidiyo kwi-intanethi nabafana,amantombazana.
I-nuance ebalulekileyo.Ungancokola ngaphandle kwekhamera usebenzisa indawo ethi "Bhala umyalezo apha".
Iisetingi zenkonzo zinengqondo, nakubaqalayo abangekathabathi nxaxheba kumdlalo onomdla wokuthandana.Isistim iya kukhetha abaviwa bomdlalo onika umdla kwimizuzwana emi-2-3.
Incoko yevidiyo yasimahla kwi-Intanethiiya kuqalangaphandle kokubhalisa, emva kondwendwe:
cofa kwiqhosha elithi "Vumela ikhamera yewebhu";
uya kuphendula isicelo "Vumela i-flash player" ngokuqinisekileyo;
cofa kwiqhosha elithi "Qala ukukhangela iqabane".
Usasazo lwabo banqwenela ukunxibelelana luyaqala.Ungamisa ekuqaleni kwazo okanye "flip ngapha" ngokucofa "okulandelayo".Ifomathi enjalo ayikunyanzeli ukuba uqhelane ne-interlocutor engathandwayo, ukhetho lokugqibela luxhomekeke kuwe kuphela.
Ngubani inkonzo yeChatroulette?
ufuna ukuqhelana kodwa uyoyika/uneentloni ukuyenza "phila";
uxakeke kakhulu, akanalo ixesha lasimahla lokufumana abahlobo / othandekayo;
ikhetha indlela yanamhlanje, eyodwa yonxibelelwano;
ukukhangela indlela engeyonto yokuchitha "imizuzu" yasimahla.
Kwaye nakubantu bayo yonke iminyaka, imisebenzi, iinkolo kunye neembono ngobomi.Akukho "ulawulo lobuso" okanye isinxibo esisinyanzelo sokuphuma.Uthatha isigqibo sokunxibelelana usebenzisa ikhamera kunye nemakrofoni okanye ukuncokola.
Izinto ezilungileyo zenkonzo yeChatroulette
Ukusebenzisa le fomati yencoko kulula kakhulu kwaye kukhuselekile.Iinzuzo eziphambili zengxoxo yevidiyo ye-rouletteimodi ye -intanethi, sebenzisasimahlakunye nenani elingenamkhawulo labatyeleli, unokuxoxanamantombazanaokanye amakhwenkwe.
100% "imfihlo".Akukho kubhaliswa apha, akukho lwazi luya kufunwa kuwe, nokuba ngumfundi wokuqala ukubhala igama okanye i-imeyile.
Unxibelelwano 24/7.Ukufikelela kwisiza kufumaneka nangaliphi na ixesha losuku, kungakhathaliseki ukuba ziiveki okanye iimpelaveki, iiyure zokusebenza okanye iiholide.
Ukuthandana ngaphandle kwemida.I-roulette yevidiyo ye-intanethi ye-intanethi, isini seendwendwe, indawo yabo, ukukhethaukubayeyiphiintombazanaokanye umfana oza kuncokola nawe akubalulekanga.
Ukusebenziseka lula.Akukho mfuneko yokukhuphela kunye nokufaka isofthiwe ekhethekileyo, yonke into eyenzekayo "iphila", kwimodi yokusasazwa kwevidiyo.
Ukhetho olukhawulezayo lwabagqatswa.I-algorithm yenkqubo imiselwe ngendlela yokubonisa abantu abatsha abafuna ukuncokola kwiscreen sakho kwimizuzwana embalwa.
Umsebenzisi uvula ihlabathi lonke, kwisifundo apho umntu akafuni ukugcina imali yokuhamba ixesha elide, "unqumle" ixesha phakathi komsebenzi okanye ukufunda.Ungancokola nabameli bamazwe ahlukeneyo apha kwaye ngoku.
ukwandisa i-horizons yakho kunye nejografi yabantu obaqhelileyo;
ukwandisa ukuzithemba kwaye ulahle ii-complexes kunxibelelwano;
fumana "iifomathi ezininzi" ii-interlocutors kwiingxoxo ngaso nasiphi na isihloko;
uya kukwazi "ukunyamekela" umntu kubudlelwane bothando;
chitha ixesha lakho lokuphumla ngenzuzo, inika umdla, ingaqhelekanga kwaye inika umdla.
Qalai-roulette yevidiyo kunyenabafana okanyeamantombazanaawo nawuphi na umsebenzi kunye neminyaka eyi-100%simahlakwayengaphandlekokubhaliswangokungeyomfunekongoku.
Yintoni chatroulette?13 Okthobha 2022, 20:41
Kwiminyaka yakutshanje, into ebizwa ngokuba yi-roulette chats ifumene ukuthandwa kakhulu kwi-Intanethi.Olu luhlobo lwenkonzo yokuthandana kwi-intanethi, kodwa umahluko phakathi kwe-roulette ye-chat kunye nesayithi eqhelekileyo yokuthandana kukuba apha umntu akakhethi i-interlocutor.Inkqubo ngokwayo ikhetha ngokungakhethi i-interlocutor ngokusekelwe kwii-algorithms zokuhambelana komsebenzisi.Umsebenzisi ngokwakhe unokukhetha kuphela isini esifunwayo kunye nobudala be-interlocutor yexesha elizayo.
Kukho neengxoxo zevidiyo zikawonke wonke.Usasazo lwevidiyo ye-roulette iyafumaneka kuye wonke umntu okwisiza http://rt.ruletka-888.com/.Kukho ukhetho olukhulu lwamaqabane ahlukeneyo onxibelelwano.Okwangoku, abantu abangaphezu kwe-1000 babhalisiwe kwisayithi, abaya kuvuya ukudibana nomhlobo omtsha.Ukwenzela lula abasebenzisi, ukongeza kwincoko eqhelekileyo, incoko yevidiyo nayo yenziwa ukuze abanxibelelanisi babonane, kwaye unxibelelwano lwaludlamkile kwaye lukhululekile.
Isebenza njani chatroulette?
Bhalisa kwisiza kwaye ugcwalise iinkcukacha zakho
Qala incoko yevidiyo kwaye ulinde inkqubo yokukhetha umntu oza kuthetha naye.
Thetha kangangoko uthanda, kwaye ukuba ufuna ukuthetha nomnye umntu, ngoko nqakraza nje kwiqhosha elithi "olandelayo" kwaye inkonzo iya kukhetha elinye iqabane kwincoko.Oku kunokwenziwa inani elingenasiphelo lamaxesha.Ngamanye amaxesha i-interlocutors iphinda iphindwe, kodwa oku kwenzeka kunqabile kakhulu.
Ngokukhawuleza emva kokubhaliswa, kuyacetyiswa ukuba ukhuphele isicelo esikhethekileyo seselula.Ilunge ngakumbi kunenguqulelo ye-intanethi yesiza, njengoko isicelo siyilwe ngokukodwa kwaye sivavanyelwe ukusebenza kwiiselfowuni.Ngaphezu koko, ngoncedo lwesicelo esiphathwayo, unokufumana izaziso ezivela kubangeneleli ngokuthe ngqo kwiscreen sefowuni, ngoko awudingi ukuthetha rhoqo kwaye ulandele uhlaziyo.
Kufuneka kuqatshelwe kwangoko ukuba le nkonzo ifumaneka kuphela kubemi abafikelele kwiminyaka eyi-18.Kwezinye, ukufikelela kwinkonzo kuvaliwe, njengoko inokuba nomxholo ongafunekiyo.Unokufunda ngakumbi malunga nemigaqo yokusetyenziswa kwenkonzo kunye nemigaqo yokuziphatha kuyo "kwimigaqo yokusetyenziswa" kwicandelo.Unxibelelwano oluyimpumelelo!
Iindwendwe ezithandekayo!Umsebenzi wesayithi ufuna umzamo omkhulu, ixesha kunye nezixhobo, ngoko ke ukuba uyayithanda iprojekthi yethu kwaye ufuna ukuba iqhubeke ikhona, unokwenza igalelo lakho ngendlela yomnikelo omncinci.Unokwenza umnikelo kwikhadi le-Sberbank: 4817760251202287Siya kuvuya naluphi na uncedo.Enkosi!))
Eyona Chatroulette online
Ngaba ukruqukile kukuncokola kwiintanethi zentlalo, kodwa awukayizami i-chatroulette okwangoku?Ngaba uyafuna ukubukela iiwebcams eziphilayo kwaye uncokole nabantu bokwenyani?Emva koko ngokuqinisekileyo uya kuyithanda le ndlela yonxibelelwano lwe-Intanethi!
Esi sisixhobo esifanelekileyo samantombazana kunye nabafana abakhetha ukuthula kwiinkampani ezinomsindo.Kuluntu lwanamhlanje, kukho abantu abaninzi abanokuqhuba incoko nabantu abangabaziyo ebomini bokwenyani, kodwa kwangaxeshanye banamava abuhlungu kakhulu ukungabikho konxibelelwano kunye ne-roulette yokuncokola yenzelwe ukulungisa le meko.
Ukujonga ngaphandle kwesi sixhobo sevidiyo, uyasiqonda isizathu sokuba ibizwe ngokuba yi-chat roulette (amagama afanayo: i-chat roulette, i-ru roulette, i-roulette ye-18, incoko ye-roulette, i-roulette yesiRashiya).Emva kwayo yonke loo nto, olu lwazi lwe-Intanethi ludibanisa izinto ezimbini: incoko kunye nomdlalo odumileyo weroulette.Kuphela yonke umdla le eqhelekileyo online ukuthandana ilele kwinto yokuba le incoko yevidiyo!Oko kukuthi, udibana ne-interlocutor engahleliwe ngokujonga, kwaye ukuba awumthandi, cofa nje iqhosha kwaye uqhubele phambili komnye umntu ongamaziyo.
Le ngxoxo yevidiyo ifumana ukuthandwa eYurophu (eNgilani, eJamani, eFransi, eItali, eSpain, eSwitzerland, njl.), e-USA (eMelika), eMexico, eChina, nakumazwe e-CIS (eRashiya, eUkraine, eBelarus) .Oku akumangalisi, kuba olu hlobo lwe-roulette yengxoxo inomdla kakhulu.
Izigidi zabasebenzisi namhlanje zijonga iincoko ze-chatroulette njengezona zilungileyo kwaye kwiimeko ezininzi yeyona ndlela ifanelekileyo yonxibelelwano.Kwaye oku kungqina ngokuqinisekileyo ukuba ukusetyenziswa kwabantu abakubudala obahlukeneyo beendlela ze-Intanethi zanamhlanje zokuthandana kunye nokuhlangana ngexesha lokwenyani yeyona ndlela ibalaseleyo kwinethiwekhi yoluntu.
Wirt chat roulette - 1000 amantombazana kunye nabafana banomdla wokuncokola nawe
Ayinamsebenzi nokuba umntu ufuna nje incoko emnandi neyonwabisayo okanye ufuna iqabane lobudlelwane obunyanisekileyo nobunzulu - kwi-roulette yokuxoxa kunye namantombazana aseRussia kunye nabafana, kunye nabangaphandle, wonke umntu unokudibana nomhlobo ozinikeleyo kunye nothando. ubomi bonke.
Abantu abaninzi abanakukwazi ukuthetha nje esitratweni nomntu abamthandayo, yaye emsebenzini bafanele bavisisane nomfanekiso owamkelekileyo ngokubanzi.Zonke ezi zinto ziqokelela kwi-subconscious kwaye zikhokelela ekubeni umntu uba ngumthinjwa woloyiko kunye nokungaqondi kakuhle, ngelixa i-roulette ibonwa njengeyona ndlela kuphela yokuphuma kule meko.
Ngoko ke kufuneka wenze ntoni kwiimeko ezinjalo?Indlela yokulahla isithukuthezi kunye nendawo yokufumana umntu ongenakukwazi ukunandipha unxibelelwano kuphela, kodwa kunye nokuseka ubudlelwane bexesha elide?
Ukuthathela ingqalelo amathuba angenasiphelo eendlela zanamhlanje zonxibelelwano lwe-Intanethi, akunakwenzeka ukulibala malunganeenzuzo ezi-5 ezingenakuphikiswa kubasebenzisi be-roulette yokuncokola:
Elula kwaye ngokukhawuleza.Iisayithi ze-roulette kunye nezicelo emhlabeni zisimahla kwaye azifuni kubhaliswa.Cofa ngokulula iqhosha elithi "qala", kwaye inkqubo iya kukukhethela ngokuzenzekelayo iqabane;
Abantu obaqhelileyo.Abanye abantu kwincoko yevidiyo baneentloni zokuthatha inyathelo lokuqala, bekholelwa ukuba ngale ndlela baya kubonakala benyanzelekile.Apha awusoze wazi ukuba ngubani kanye kanye oza kuqhuba incoko.Ukuba ungene kwingxoxo yevidiyo, uya kubona umntu kwelinye icala lesikrini naye efuna abahlobo kwaye ulungele ngokupheleleyo kungekuphela nje ukunxibelelana, kodwa kunye nokuseka unxibelelwano olubonakalayo nomphulaphuli omangalisayo;
Kukulungele ukudibana kwaye uthi ndlela-ntle.Ukuba uyaqonda ukusuka kwimizuzu yokuqala yokunxibelelana ukuba i-interlocutor ayinomdla, okanye ukuba uziphatha ngokungafanelekanga, ngoko ngaphandle kwenkcazo okanye ukuxolisa, cinezela iqhosha elithi "elilandelayo", kwaye uya kutshintshwa kumphulaphuli omtsha;
Intlanganiso iqhutywa ngekhamera yewebhu.Kule ngxoxo, ngaphandle kokukhuphela, unokubona ngokukhawuleza kwaye uve i-interlocutor, esebenza ngakumbi kunembalelwano kwiinethiwekhi zentlalo, apho abasebenzisi bahlala bethumela ulwazi olungahambelani nenyani endaweni yesithombe sokwenyani.Ukuqhelana nekhamera yewebhu kulula ngakumbi;
Ukuphelisa isithukuthezi kunye nokukruquka.Asinguye wonke umntu onokuxelela izalamane okanye abahlobo ngokukhululekileyo ngeengxaki ezibuhlungu.Kwi-chat roulette stream awukwazi ukwabelana ngeengcinga zakho kuphela nomhlobo omtsha, kodwa ufumane iqabane lomphefumlo elinemigaqo efanayo yobomi.
I-World Chatroulette - indawo engayi kushiya nabani na ongenamdla
Ngokuqhelekileyo amantombazana kunye nabafana abafuna ukutshintsha indlela yabo yokuphila baqala ukukhangela abantu abatsha kwiintanethi zentlalo, engasoloko ibanika umphumo oyifunayo.Xa kuthelekiswa ne-chatroulette, kunzima kakhulu ukufumana abahlobo abatsha apho, kuba awukwazi ukuqiniseka ngomnye umntu.Olwesibini ukhetho ukuba abantu badla ngokukhetha online ukuthandana kunye nabasetyhini kunye namadoda yokwenene, nto leyo isiba ethandwa kakhulu yonke imihla.
Ukuthandwa kwencoko yevidiyo ephilayo yaseRussia kuyakhula ngenxa yeenzuzo ezininzi eziyahlula kuyo nayiphi na enye indlela.Le ndlela ingaqhelekanga yokufumana abantu abatsha itsala ngakumbi nangakumbi yabafana kunye namantombazana kunye nomoya onomdla kunye nento eyothusayo, echukumisa imithambo-luvo kwaye yongeza iziqholo kubomi bemihla ngemihla.
Eyona nto inomdla kuyo yonke le nto kukuba i-roulette ekhawulezayo yokuncokola ngoku ayincedi nje kuphela abantu ukuba bonwabe kwaye bazane, kodwa ikwanceda ekudaleni usapho, kungakhathaliseki ukuba iyavakala kangakanani na.Enkosi koku, abasebenzisi abaninzi abangabodwa abangafumani xesha kunye nethuba lokufumana iqabane lomphefumlo wabo kwisantya sobomi bale mihla bafumana ulonwabo lwabo.
Chatroulette kwisikhangeli - ukuthandana kunye nonxibelelwano ngonqakrazo olunye
Itekhnoloji yanamhlanje iguqula umhlaba kwaye iphucula zonke iintlobo zonxibelelwano.Namhlanje, ngenxa yencoko kunye nabantu basemzini kunye namaRussia, abantu banokuncokola ngaphandle kokushiya amakhaya abo kwaye bafumane abantu abangabaziyo ngokucofa okukodwa.Ngoku wonke umntu unokuthatha ithuba lendawo apho inani elikhulu labafana namantombazana lijonge amava amatsha kwaye bafuna ukuchitha ixesha nabahlobo abatsha.
Ukongeza, i-roulette enomdla kwisiphequluli seYandex yindlela yanamhlanje yokufumana abantu abatsha, apho yonke into igqitywe ngamabona-ndenzile.Ukuba udiniwe yindlela yesiqhelo okanye uziva ulilolo, ngokuqinisekileyo lixesha lokuba ungene kwindawo ebangel’ umdla ye-roulette yokuncwasa nabantu ongabaziyo.Ndikholelwe, kunzima ukufumana umdla ngakumbi, kwaye ngexesha elifanayo ukhuselekile, indlela yokunxibelelana nomntu wangempela.
Nokuba awuzange uzame ukuncokola namantombazana amahle, mhlawumbi ukhe weva ngendlela elula nethandwayo yokuhlangana nabantu abatsha, ukwenza abahlobo kunye nokwakha ubudlelwane bothando.Zama i-chatroulette ngekhamera kwaye ubone ukuba kulula kangakanani ukutshintsha ubomi bakho bemihla ngemihla kwaye ube ngumntu owonwabileyo.
Kutheni i-roulette yaseRashiya ithandwa kangaka?
Inyaniso kukuba i-chatroulette yenza kube nokwenzeka ukuba ube nexesha elimnandi.Nantsi into enikezela nge-roulette yewebhu kwingqwalasela yakho ngaphandle kokubhalisa kwaye ngaphandle kwentlawulo:
Ukuba awuyazi indlela yokuqweqwedisa isibindi sokudibana nabantu besini esahlukileyo kubomi bemihla ngemihla, unethuba elikhethekileyo lokuthatha ithuba lokuqhelana nomntu oqhelekileyo kule ngxoxo yevidiyo.
I-Chatroulette iya kukunceda uqale incoko elula, kodwa kwangaxeshanye inomdla kunye ne-interlocutor engahleliwe.
Umdlalo oqhelekileyo wencoko ye-roulette, xa uhleli kwaye ujike phakathi kwabangeneleli abangakhethiyo kwaye uqalise incoko nomntu omthandayo.
Apha unokwabelana ngezinto onomdla kuzo, kunye nomdla kwi-interlocutor ngokukwazi kwakho ukudlala ikatala, ukucula, njl.
Ayiqhelekanga, kodwa iyinyani: abanye bade balawule ukwenza iingcebiso kwi-chatroulette!- kumantombazana athandanayo ngaphandle kokubhalisa.
Ewe, olu luhlu lunokuqhubeka ngokungenasiphelo, kuba iingcamango zabantu azipheli :)
I-Chatroulette yenze ukuba abantu bakwazi ukuncokola ngexesha lokwenyani nabantu abangabaziyo.Abantu abaninzi abakayazi le nto okwangoku, kuba sele kukho ii-analogues ezimbalwa ze-roulette yencoko (i-roulette ye-Ru, incoko yesiRashiya, njl.njl.).
Incoko ye-KuMit-incoko yevidiyo ye-premium yokuthandana kwi-intanethi kunye namantombazana
Ihlabathi litshintsha ngokukhawuleza kunokuba sinexesha lokuqaphela.Ubuchwephesha obutsha buvela kwaye obudala buhamba kwixesha elidlulileyo, i-Intanethi inokuthatha indawo yesikolo, iyunivesiti okanye iikhosi zemfundo, kunye nenethiwekhi yoluntu kunye nezithunywa ezikhawulezayo ziye zaba yinxalenye yobomi balo naluphi na uhlobo lwangoku.
Kodwa kukho into kule whirlpool ehlala ingaguqukanga iminyaka eyiwaka.Esi sidingo somntu ngamnye wethu kunxibelelwano, ukukhangela abahlobo bokwenene kunye neqabane lomphefumlo.Isiphelo sihlala sinjalo, kuphela iindlela zokusiphumeza ziyatshintsha.
Esinye sezi zixhobo ziincoko zevidiyo ezikwi-intanethi.Ibiyifomathi edumileyo ngaphezulu kweminyaka elishumi ngoku.Nangona kufanele kuthiwe ayizizo zonke iingxoxo zewebhu zanamhlanje ezihlangabezana nemigangatho kunye neemfuno zangoku.Uninzi lwee-chatroulettes azikwazi ukuqhayisa ngokumodareyitha okulungileyo, abaphulaphuli abakhutheleyo, okanye ukusetyenziswa ngokulula.Nangona kunjalo, kusekho iimeko.Enye yazo yincoko yevidiyo yaseRussia iCooMeet.Eli liqonga elifanelekileyo lokunxibelelana nesini esahlukileyo, ukuthandana okungaqhelekanga kunye nokufumana iqabane lomphefumlo.Kwaye ukumodareyitha okugqwesileyo kunye nomsebenzi oncomekayo kwenza le vidiyo incokole namantombazana ibe yenye yezona zilungileyo zohlobo lwayo.
Ingxoxo yevidiyo yeCooMeet Premium yinkonzo ehlala iphuculwa kwaye iphuhliswa ukuba ibe yeyona ilungileyo phakathi kweengxoxo zewebhu zewebhu.Kwaye oku, kunjalo, kufuna inkxaso-mali.Sinokuyilahla indawo ngeentengiso kunye neebhena eziphumayo ngexesha lokufowuna ukwenza inzuzo kuyo.Kodwa iya kuba ingalunganga ngokumalunga nabasebenzisi.
Ke ngoko, iCooMeet Premium yaziswa, leyo ngentlawulo encinci ikuvumela ukuba ukonwabele zonke izibonelelo kunye neempawu zesiza.Oku kwenza ukuba kube nokwenzeka ukwenza inkonzo ekumgangatho ophezulu ngokwenene:
elona nqanaba liphezulu lokhuseleko kunye nemfihlo;
ukumodareyitha ngokucokisekileyo 24/7;
ukungabikho ngokupheleleyo kwe-bots kunye neefake kwisiza;
ividiyo ehlala ibalaseleyo kunye nomgangatho wesandi;
izixhobo ezifanelekileyo zokufumana abangeneleli abafanelekileyo.
Okona kulungileyo, ungasebenzisa iCooMeet simahla ngexesha lelingo.Kule meko, uya kuba nokufikelela kuyo yonke imisebenzi kunye namathuba okuxoxa ngevidiyo nabantu ongabaziyo.Kwaye sele ekupheleni kwexesha lamahhala, wena ngokwakho uthatha isigqibo sokuba uthenge ukufikelela kwi-premium okanye cha.Kodwa awukwazi nokuthandabuza - uya kuyithanda!
Iimpazamo xa ukhangela i-roulette yencoko KuMit
Impazamo ephambili kukungakhathali xa ufaka igama leCooMeet chatroulette.Ngokomzekelo, kukho ezo typos: i-comet, i-coomet, i-coo meet, i-coomeets, i-coomee, i-coomate, i-commet, i-coomeeet, i-coomet, i-coomet, i-comet chat kunye nokunye okunjalo.Yintoni ingozi?
Kwiimeko ezininzi, awuyi kufumana indawo ekukhangelweni, kodwa uGoogle uya kuqonda ukuba uthetha ukuthini kwaye akunike ikhonkco elichanekileyo.Kodwa kweyona meko imbi kakhulu, ubeka umngcipheko wokufikelela kwindawo yabaqhathi abasebenzisa ngokuthe ngqo igama elifana neCooMeet kwi-intanethi.Kwaye kulapho iingxaki ezinzulu zinokuqala khona.
Ingcebiso!Jonga idilesi yewebhusayithi yeCooMeet ngokoqobo ipela ngonobumba.Ngokufanayo, jonga ngononophelo i-CooMeet yengxoxo ye-intanethi esemthethweni kwiivenkile ze-iOS okanye ze-Android.
Khumbula ukuba iCooMeet ayisiyiyo nje incoko yaseRashiya.Iqonga lethu lisebenza kumazwe amaninzi aphambili ehlabathi.Unokukhetha ilizwe lakho ngqo kwisiza ezantsi - isiza siya kuboniswa kwangoko ngolwimi olufanelekileyo ukuze kube lula kuwe.
Uqala njani ukusebenzisa incoko yevidiyo?
Yonke into ilula kakhulu:
1. Uya kwiwebhusayithi yeCooMeet kwaye ucofe iqhosha ukuqalisa incoko.
2. Chaza isini sakho kwaye uvumelane noMgaqo-nkqubo waBucala.
3. Nika indawo ukufikelela kwikhamera yakho yewebhu kunye nemakrofoni, kwaye emva koko uqalise ukuxoxa nabasebenzisi abangakhethiyo.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala kwisayithi, inkqubo iya kukunika ukuba ubhalise kwaye ufumane imizuzu yasimahla yokuncokola namantombazana kwi-roulette yengxoxo.Sicebisa ukuba usebenzise le bhonasi intle.
Ngendlela, kwiisetingi zengxoxo unokukhetha indlela othanda ukunxibelelana ngayo - ngevidiyo okanye ngencoko yombhalo.Kwibhloko "yeMiyalezo", unokuqhagamshelana nenkxaso yobugcisa ngokuthe ngqo kwaye ufumane uncedo ngomsebenzi wakho.
Ukuba unxibelelwano nomntu othile aludibanisi, ungatshintshela kolandelayo ngocofa nje olunye.Ngaloo ndlela, ngobusuku nje obunye unokudibana nabantu abaninzi abanomdla, fumana abahlobo abalungileyo kunye neqabane lomphefumlo.Hlangana, ncokola nangasiphi na isihloko, cwangcisa intlanganiso ebomini bokwenyani kwaye uqale ubudlelwane obutsha ngaphandle kokulibazisa!
Iingcebiso zokuSebenzisa iNcoko yeVidiyo eRandom
Yiba nembeko kunye nomonde, ungabi krwada kubaxumi bakho kwaye uziphathe ngokuchanekileyo kubo.Le yeyona mithetho isisiseko yonxibelelwano hayi kuphela kwi-chatroulette ye-intanethi, kodwa ngokubanzi kwi-Intanethi.Kodwa kukho iingcebiso ezimbalwa eziluncedo ngokukodwa kunxibelelwano kwi-chatroulette kwi-intanethi:
1. Seta ikhamera yakho yewebhu kunye nokukhanya.Qinisekisa ukuba umfanekiso osuka kwikhamera yakho ucacile, kwaye ujolise ngqo kuwe, hayi etafileni okanye kwenye indawo.
2. Qaphela umgangatho wesandi.I-microphone embi inokonakalisa lonke unxibelelwano.Ukuba isandi esivela kuyo sinomgangatho ophantsi, kungcono ukuthenga entsha.Nokuba imodeli yohlahlo lwabiwo-mali iya kwenza.
3. Ingxelo yabasebenzisi abaphula imigaqo-nkqubo ye-CooMeet.Sizama ukubeka iliso kwindlela yokuziphatha engamkelekanga kwaye sivale abaphuli mthetho ngexesha elifanelekileyo.Kodwa ngoncedo lwakho, inkqubo yokumodareyitha ikhawuleza kwaye isebenze ngakumbi.
4. Ngaphambi kokuba uqalise unxibelelwano, beka izinto ngolungelelwano malunga nawe - ngale ndlela uya kujongeka ucocekile kwaye ucocekile emehlweni omngeneleli.Chitha imizuzu emi-5 yokucoca - awuyi kuzisola.
5. Ngexesha lencoko, zama ukujonga kungekuphela nje kwesikrini, kodwa nakwikhamera yewebhu.Ngoko i-interlocutor iya kuba nengcamango yokuba ujonge iso-to-eye.Oku kunceda ukwenza uqhagamshelwano olungcono.
Kwaye okona kubaluleke kakhulu, sebenzisa iCooMeet chatrandom ngolonwabo, nxibelelana, fumana abantu abanomdla kwaye uhlale unethemba.Lo ngumgaqo oyintloko wempumelelo kuyo nayiphi na i-chatroulette!
Unokufunda ngakumbi malunga nendlela iChatroulette esebenza ngayo kwi-intanethi ngokulandela ikhonkco kwiwebhusayithi.
Ingxoxo inojongano oluhle.I-database iqulethe inani elikhulu lababhalisi.Kodwa akuyomfuneko ukuba ukhangele ofanelekileyo phakathi kwabo.Ingxoxo iya kukukhethela i-interlocutor.Unxibelelwano ngekhamera luya kukunika ithuba lokusondela kumntu ongaqhelekanga.Uhlobo lwamava oya kufumana, awusokuze ululibale.Unokuxelela umnxibelelanisi wakho into enomdla ngawe okanye ufunde okuninzi ngaye.I-Chatroulette iya kukunika ithuba lokulahla ii-complex kwaye ube ngumntu ovulelekileyo.
Inkonzo idlule kumaxesha okunyuka okungaqhelekanga kunye nokuwa okulusizi, kwaye isathandwa kakhulu kwintsimi yayo.Icala elibuthathaka lalinqongophala, enyanisweni, ulawulo lomsebenzisi, ngenxa yokuba amaxesha ngamaxesha izibonelelo ze-anatomical "ziyawa" kwingxoxo endaweni yobuso babangeneleli, abangathandiyo wonke umntu.
Rhoqo, umsebenzisi osebenzayo wefowuni ephathwayo unxibelelana nabahlobo bakhe, usapho, oogxa bakhe ngokuthumela izithunywa ezikhawulezileyo, isibini seenethiwekhi zentlalo.uthungelwano kwaye ungumtyeleli ubuncinane kwiforamu enye, nokuba iyenzeka ngenxa yemfuneko.Ukuthetha ngeeforamu, ukuba ngoku uqengqeleka amehlo akho kwisiphakamiso sokuba uyisebenzise, ​​khumbula izibonelelo ezinkulu ezinomthamo we-terabytes womxholo wemidiya, ngenxa yokuba i-piracy ithathe intsingiselo eyahlukileyo ngokupheleleyo.
Ukuba ufuna ukufumana abahlobo abatsha okanye ukonwaba nje, kuya kufuneka undwendwele Chat Roulette.Ukwahluka kwale ngxoxo kulele kwinto yokuba awukhethi i-interlocutor yakho ngokwakho.Inkqubo ikhetha ngokungakhethi iqabane onokuthi unxibelelane nalo.Oku kuphembelela umdla, kuba ngalo lonke ixesha kufuneka unxibelelane nabantu abatsha.Olu hlobo lonxibelelwano luvuselela ingqondo kwaye luvuselele umdla.
Unxibelelwano kwi-Chat Roulette ivumela abantu ukuba batshintshe ngokukhawuleza kwiimeko ezintsha, bazikhulule.Nabona bangeneleli abaneentloni baqala ukuthetha ngokukhululekileyo nabantu abangabaziyo.Chat Roulette akafani namanye amagumbi okuncokola amaninzi.Emva kwayo yonke loo nto, i-interlocutor ekhethiweyo ngokungakhethiyo inokutshintsha kakhulu ubomi bakho kwaye ikunike ulwandle lweemvakalelo.Le ngxoxo yevidiyo isimahla ngokupheleleyo.
Ekuphela kwento oyifunayo ukunxibelelana kule ngxoxo yikhompyuter kunye nesantya esiphezulu se-intanethi.Abantu bokwenyani bathatha inxaxheba kwiincoko, akukho nkohliso apha.Yiyo loo nto abathathi-nxaxheba bengxoxo behlala belindele okumnandi.Bonke abantu abanomdla kakhulu abaqhelana nabo basoloko besenzeka ngamabona-ndenzile, yiyo loo nto abantu bakhetha i-ChatRoulette.Uyakwazi ukwenza abahlobo abatsha okanye ufumane uthando lwakho.
Qiniseka ukuba unxibelelwano kwi-Chat Roulette aluyi kukushiya ungakhathali.Ukuba udiniwe bubomi bemihla ngemihla kwaye ufuna amava amatsha, ke iChatroulette yeyakho.
Ixesha ngalinye ngaphambi kokuqala konxibelelwano, uya kuba nolindelo olumnandi loluphi uhlobo lwe-interlocutor oya kuhlangana nalo.Mhlawumbi namhlanje kuya kufuneka unxibelelane nentombazana entle, kwaye ngomso ingxoxo iya kukukhethela umfana ovuyayo othanda ukuhamba kwaye uya kukuxelela izinto ezininzi ezintsha nezinomdla malunga namazwe akude.I-Chatroulette luhlangulo olukhulu kwi-melancholy kunye nokukruquka.
Ngokukhawuleza ukuba i-interlocutor yakho ibonakala kwisikrini, uya kulibala ukuba ukhetho lwenziwe ngamabona-ndenzile.Umgama uya kucinywa, kwaye uya kuqala ukunxibelelana kwi-wavelength efanayo.
I-Chatroulette yinkonzo eyodwa yonxibelelwano olungaziwayo nabantu kwihlabathi liphela.Uya kuba nenani elikhulu labasebenzisi onazo abathi, njengawe, bafuna ukwenza abahlobo abatsha okanye bathulule umphefumlo wabo komnye umntu.Isicelo sinokhuseleko oluthembekileyo, ukuze kungabikho namnye wabangeneleli oza kukwazi ukufumana idatha yakho, indawo okanye olunye ulwazi lomntu.
Kutshanje, abantu abaninzi bakhetha ukuqhelana kwiindawo ezikhethekileyo okanye kwiintanethi zentlalo.Kodwa ingxaki ngeenkonzo ezinjalo kukuba ukubhaliswa kuyafuneka apho, kunye nokubekwa kwedatha yakho, njengendawo, ubudala, imfundo, njalo njalo.Ayinguye wonke umsebenzisi ofuna ukwabelana ngolwazi lomntu siqu, kuba ngamanye amaxesha lunokwenzakalisa kakhulu.
I-app ye-Chatroulette inika ama-introverts ithuba elikhethekileyo lokufumana abahlobo kunye nokunxibelelana ngaphandle koloyiko lwendawo yabo.Le ngxoxo ijongwa ngabamodareyitha ubusuku nemini, ngoko ke, kwimeko yokuziphatha engathandekiyo ye-interlocutor, unokukhalaza ngaye kwaye abalawuli baya kuvimbela iphepha lakhe.
Ukusebenzisa le nkonzo, akunyanzelekanga nokuba ungene kulo naluphi na ubhaliso okanye uvule iakhawunti yakho.Cinezela nje "ukuqala" kwaye uqalise ukukhangela abangeneleli.Ingxoxo ithetha isiRashiya ngokupheleleyo, kodwa isebenza ngaphandle kweengxaki kuwo onke amazwe ehlabathi.Uya kukwazi ukufumana abahlobo abathetha ulwimi lwakho kwaye uqale ukuncokola ngoko nangoko.
Abangeneleli banokukhethwa ngokungakhethiyo.Ukuba ngequbuliso unxibelelwano lufikelele kumqobo okanye awumthandi lo mntu, akukho zingcaciso kunye nokuthula okungathandekiyo kuyadingeka.Ukuphelisa nje incoko naye ngokucofa iqhosha elithi "Okulandelayo".Kwincoko, ungasebenzisa ikhamera yewebhu kunye nemakrofoni, okanye uxoxe nje ngemiyalezo.
Le ncoko ayisosithunywa nje esiqhelekileyo.Enkosi kuye, uya kukwazi ukudibana nabantu abakhethekileyo nabamangalisayo abavela kwihlabathi liphela.Apha awukwazi ukubhala okanye ukuthetha kuphela, kodwa wabelane ngeetalente zakho kunye nezakhono ezingavamile.Skrolela nje kuluhlu lwabasebenzisi abakhoyo ude ukhubeke kwinto enomdla kwaye inexabiso.
Ukwenza umfanekiso wakho ukhanye kwaye ungalibaleki kwimbono yokuqala, cinga zonke iinkcukacha kwangaphambili.Ukuvela phambi kwabangeneleli bakho ngendlela engaqhelekanga, uthatha incwadi oyithandayo, into yokudlala ethambileyo okanye isilwanyana sasekhaya.Ke unokwenza umbono ochanekileyo kwangoko, kwaye ufumane abantu abanengqondo efanayo phakathi kwesigidi sabasebenzisi.
Wamkelekile kwiChatroulette!Incoko yethu yevidiyo engaziwayo ityelelwa mihla le ngabasebenzisi abangaphezu kwamawaka angama-200.Phakathi kwabo, ngokuqinisekileyo uya kufumana iqabane olithandayo.
Le yinkonzo yomyalezo wevidiyo, incoko yevidiyo engaziwa apho unokuncokola nabantu abavela kwihlabathi liphela usebenzisa ikhamera yakho yewebhu.Cinezela nje iqhosha elithi "Qala", kwaye incoko iya kukukhethela i-interlocutor engahleliweyo phakathi kwamakhulu amawaka abasebenzisi.Awuyi kumazi nabani na umntu othetha naye, nokuba uvela phi.Kodwa ngakumbi umdla - unokuhlala usazi omnye nomnye ngexesha lencoko kwaye ufumane izinto ezifanayo.Ukuba ngenxa yesizathu esithile awuyithandi i-interlocutor, nqakraza nje "Okulandelayo" kwaye uqhubeke uye kwelinye elilandelayo.Akukho mfuneko yakuthi ndlela ntle, ukucela uxolo okanye ukuzithethelela.
Hayi akunjalo!Ingxoxo yethu SIMAHLA, ingaziwa kwaye ayifuni ubhaliso oluntsonkothileyo.Akukho mfuneko yokuqamba kunye nokukhumbula ukungena kunye neephasiwedi, uqinisekise i-imeyile okanye inombolo yefowuni.
Siyakuhlonipha ukungaziwa kwabasebenzisi bethu: umngeneleli wakho akazukwazi igama lakho okanye apho usuka khona, ngaphandle kokuba ukhetha ukwabelana naye ngolu lwazi.Akunyanzelekanga ukuba unyamezele indelelo okanye ihambo ekhubekisayo yomnxibelelanisi.Ukuba uphula imigaqo yengxoxo yethu okanye umthetho, unokuhlala ukhalaza kumodareyitha, oya kuqwalasela isikhalazo sakho kwaye avimbele umaphuli-mthetho.
Yintoni oyifunayo ukuqala ukuncokola?
I-intanethi, ikhamera yewebhu kunye nomoya omhle.Kodwa nokuba awunayo ikhamera yewebhu, ayinamsebenzi, imakrofoni iya kwanela, okanye ungasebenzisa incoko yombhalo kwifestile ngasekunene.Nangona kunjalo, khumbula ukuba abantu beza kwincoko yevidiyo ngokuyintloko ukuze babone i-interlocutor, ngoko ikhamera ayiyi kuba yinto engafanelekanga.
Ngubani oza kundidibanisa naye?
Apha kuya kufuneka uthembele kwintando yeChance yobungangamsha bakhe.Ukuba awuyithandi enye i-interlocutor, unokuhlala uqhubela kwelinye elilandelayo.I-Chatroulette yeyona ncoko yevidiyo inkulu abasebenzisi bayo bathetha isiRashiya, ngoko akufuneki ukhumbule amabinzana asuka kwincwadi yesiNgesi - bayakuqonda apha!
Indlela yokwenza abahlobo kwincoko?
Kulula njengepayi!Qala incoko ngokucinezela iqhosha elithi "Qala", ncuma kwaye uthi "Molo!".Musa ukulinda inyathelo elivela kwi-interlocutor, libonise kuqala.Sonke sineentloni ukuqalisa incoko, kodwa ekubeni sithabathe inyathelo lokuqala, siyaqonda ukuba sasisoyika ilize ngokupheleleyo.Khumbula: wonke umntu uyalingana kwincoko.Bonke abasebenzisi bethu balapha ngenjongo efanayo njengawe-ukuchitha iiyure ezimbalwa, ukudibana nabantu abanomdla kwaye ufumane inxalenye yesimo sengqondo esihle.Inhlanhla kunxibelelwano kunye nokwazana okuhle!
I-Chatroulette KuMit-dibana namantombazana kwikhamera yewebhu
Ngaba ujonge indlela ekhawulezayo yokudibana nentombazana ekrelekrele nenhle?Incoko yewebhu yeCooMeet (inguqulelo yesiNgesi yeCooMeet) ikuvumela ukuba unxibelelane nesini esilungileyo esivela kumazwe ahlukeneyo ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.Uqhagamshelo olukhawulezileyo, ukufowuna kwevidiyo ekumgangatho ophezulu, akukho xinzelelo kwaye kuphela abona bangeneleli abalungileyo abaya kuhlala bedibana nawe ngoncumo.
Siyazi ukuba lixabiseke kangakanani ixesha namhlanje: sihlala sinyanzelwa ukuba sibeke phambili, silondoloze kwaye singxame, kwaye asinalo ixesha lokwenza yonke into ebesiyicwangcisile.Kwesi siphithiphithi, ukuthandana kunye nobudlelwane kudla ngokuthatha indawo engasemva.Iwebhusayithi esemthethweni ye-KuMit iqinisekisa unxibelelwano oluphezulu kuphela kunye namantombazana athembekileyo - iintlanganiso ze-intanethi, abantu obaziyo abatsha kunye nomoya omkhulu.
Ukucofa nje kube kanye - kwaye inkqubo yethu yokukhetha ekrelekrele iya kukunxibelelanisa nomnye wamawakawaka abantu ongabaziyo abanomtsalane.Qiniseka ukuba onke amantombazana beza apha ukudibana, ukuxoxa kunye nokwakha ubudlelwane.Akukho nkonzo yasimahla enokubonelela ngenqanaba eliphezulu elifanayo lenkonzo njengeKuMit Chat:
ukumodareyitha ngesandla kwentombazana nganye ebhalisiweyo;
ukusonjululwa ngokukhawuleza kwazo naziphi na iimbambano;
Izohlwayo ezifanelekileyo ngokuphulwa ngakunye kwemigaqo ye-chatroulette;
uphuhliso oluqhubekayo kunye nokuphuculwa kokusebenza kwendawo.
Eyona ndlela ingcono kwi-Omegle kunye ne-ChatRoulette
Wonke umntu owayenomdla kwi-roulettes kwi-intanethi mhlawumbi ukhumbula ezo zingxoxo ezimi kwimvelaphi yonxibelelwano olungenamkhethe.Ezi yayiyi-Omegle kunye ne-ChatRulet, evele emva ngo-2022.Owokuqala weza kuthi evela phesheya, okwesibini yingqondo yesikolo saseRashiya u-Andrei Ternovsky.
Zombini iingxoxo zewebhu zazisekwe kumgaqo ofanayo: unxibelelwano nabangeneleli abangacwangciswanga abavela kwihlabathi liphela.Kwaye nangona u-Omegle wayenesiqalo sentloko kwiinyanga ezininzi, yayiyi-ChatRoulette eyayilawula i-roost ixesha elide.Nangona kunjalo, zombini incoko-engacwangciswanga ekugqibeleni yajongana “nesifo” esifanayo, esiseyingxaki kwaye sigxotha abaninzi ekusebenziseni.
Oku, ngokuqinisekileyo, kumalunga nomxholo ongafanelekanga.Kwihlabathi elifanelekileyo, abantu abalungileyo nabanobuhlobo abafuna ukwazana, ukunxibelelana, kunye nokunikana umoya omnandi kufuneka bangene kwividiyo yeroulette.Inyaniso:
rhoqo udibana nabadlali bemiboniso abafuna ukubonisa iimpawu zabo ezintle kwi-interlocutor engakhethi;
intombazana entle inokujika ibe ngummeli weyona misebenzi indala inikezela ngeenkonzo ezisondeleyo;
uqhagamshelwano olulandelayo luya kukunika ithuba lokonwabela umfanekiso omileyo okanye ividiyo enomxholo wentengiso kuphela.Ewe, awukwazi ukukhanyela abantu be-PR fantasy.
Emva koko kuye kwacaca ukuba enye indlela efanelekileyo iyafuneka-incoko yevidiyo engacwangciswanga, engena apho ungakhathazeki malunga nokuba ngubani oya kuba kwelinye icala lesikrini.Kwaye phambili phakathi kweengxoxo zevidiyo eziguqukileyo yiKuMit.
Kwakumodareyithwa kwabathathi-nxaxheba kunye namanyathelo athathwa ngexesha elifanelekileyo ngokuphulwa ngakunye okwaba sisisombululo kwingxaki enzima yeenkonzo ezifanayo.Ukususela ekuqaleni, sasiqonda ngokucacileyo ukuba kwakungenakwenzeka ukubala kwi-automation epheleleyo yale nkqubo - sifuna inkonzo yoluntu ephezulu ukwenzela ukuba abasebenzisi baqonde inzuzo kunye neenzuzo zesayithi abazisebenzisayo.Yaye imigudu yaba nemiphumo emihle.
Namhlanje-iKuMit yenye yezona ncoko ziphezulu nezikhuselekileyo zewebhu.Kwaye nabani na unokungqina oku.Cofa nje "Qala ukukhangela" kwaye uzame i-roulette ye-intanethi kunye namantombazana.
Amantombazana amahle kakhulu Russian online
Ukufumana uthando kunye nokwakha ubudlelwane kuye kwaba lula kakhulu ukususela ukuthandana iinkonzo waqala ukuphuhlisa online.Kwaye i-chatroulette ibe sisixhobo esikhulu kwezi njongo, ukujoyina inethiwekhi yoluntu kunye neesayithi zokuthandana.Kodwa ngokungafaniyo nezi zimbini zokugqibela, kukuncokole ngevidiyo apho unokuwabona amehlo omntu onxibelelana naye onomtsalane, uncumo lwakhe kunye nokuziva iimvakalelo ezingenakuchazwa ukusuka kufutshane nokuba kumgama wamakhulu eekhilomitha.
Usathandabuza?Qhagamshela simahla kwaye uqalise ukuncokola namantombazana kwincoko yethu yevidiyo engacwangciswanga ngoku ngaphandle kokubhalisa kunye nokuzalisa iprofayile.Ufuna kuphela ikhamera yewebhu ukuze uqalise incoko yevidiyo yeKuMit.Kwaye ukuba ngokukhawuleza i-interlocutor ayikho kwincasa yakho - tshintshela kumntu omtsha ngokucinezela iqhosha elinye.Amantombazana avela kwihlabathi lonke sele elinde wena!
Indlela yokungenelela kwingxoxo-roulette yomnye umntu ukwenzela iipranks
Molo mhlobo othandekayo, namhlanje ndiza kukuxelela imfihlo encinci ukuba abaninziabadlala i-chatroulettebafihla , kwaye umntu ucela le mfihlelo isibini samawakaababhalisile (ababhalisi),kodwa ndagqiba ekubeni ndibelane ngolu lwazi luxabisekileyo simahla ngokukodwa kuwe.
Ndifuna ukukucacisela ngoko nangoko:Enyanisweni, asiyi kuba nakuphi na ukugqekeza, hayi hayi!awungxamanga ukulishiya iphepha, kodwa funda ngononophelo, asiyi kugqekeza, kodwa sidlulisela abanxibelelanisi ababini omnye komnye.Okokuqala kufuneka ulungiselele
Oku kunokwenziwa, ngokuqinisekileyo, ngendlela eyahlukileyo, kodwa ndiya kubonisa usebenzisa umzekelo we-OBS - Studio
imitha yelizwi (mahala)VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:Voice meter virtual cable
Iziphequluli ezimbini: Umzekelo, uGoogle Chrome kunye neOpera (Kufuneka ukhethe ezo zikhangeli ezinokusebenza kunye nencoko)
Xa ufaka ikhamera ye-obs ebonakalayo, kubalulekile ukufaka iikhamera ze-4 (nangona kuphela i-2 iya kufuneka) iikhamera ezi-2 ezingaphezulu zinokungena ngokufanelekileyo ngenxa yesinye isizathu.
Ngokwemithetho ye-Chatroulette, ngokwenene akuvumelekanga ukusebenzisa i-emulators ye-webcam, kwaye i-Chatroulette ilwa ngokwenene ngokuchasene nale nto, kuquka ukuvalwa kwe-akhawunti (Lumka), kodwa singabaduni, akunjalo?Kufuneka siqinisekise ukuba ikhamera yethu yenyani yamkelwa njengeyokwenyani, siyakwenza amaqhinga amancinci nawe kumhleli wobhaliso.
Ngoko ke, ukuvula lo mhleli wobhaliso (regedit) ufuna amalungelo omlawuli wenkqubo, ngaphandle koko utshintsho olwenziwayo aluyi kwenziwa nangayiphi na indlela nangemva kokuqalisa kwakhona ikhompyutha.
Singena kumhleli wobhaliso: Nokuba amaqhosha eWin + R aya kuvula ifestile apho sibhala i-regedit kwaye siphumeze, okanye kube lula ngakumbi kwindawo yokukhangela (fumana iinkqubo kunye neefayile), bhala nje i-regedit kwaye ucofe indlela emfutshane.
Kumhleli wobhaliso: Kufuneka sifumane i-OBS - Virtual (unokucima zonke iifolda okanye utshintshe igama labo, umzekelo, kwi-Mycamera) Okulandelayo, kufuneka sifumane ikhamera yethu ye-OBS 1/2/3/4 kumhleli wobhaliso kwaye tshintsha amagama abo abe ngawethu, umzekelo OLDcamera1 njl.Kubaluleke kakhulu ukwazi into oyenzayo!kungenjalo ubeka emngciphekweni wokonakalisa amangeno obhaliso kwaye kufuneka uphinde ufake iikhamera zethu.
Ukuba wenze yonke into ngokuchanekileyo, emva kokuqalisa kwakhona i-chatroulette kwisiphequluli, ezantsi kuya kuba nokukhethwa kweekhamera zethu kunye nemakrofoni.Ukuba kwibhrawuza ngokuqinisekileyo unike ukufikelela kwikhamera kunye nemakrofoni.
Ukuba emva kwayo yonke i-manipulations awunayo ikhamera ebonakalayo kwi-chatroulette, ngoko wenza into engalunganga: ngokomzimba, ngoko ke kufuneka isuswe apho!Into kukuba i-chatroulette (ewe, ungamangalisi) ine-algorithm yokukhetha ikhamera ephambili, oko kukuthi, ikhamera yakho yewebhu yokwenene ineyona nto iphambili kwi-chatroulette kwaye ngoko akufanele ibe kwisiphequluli.
Kubalulekile!kufuneka ungene kwi-chatroulette phantsi kweeakhawunti ezahlukeneyo:Zombini izikhangeli akufuneki zidlulelane
Ukuphepha iimpazamo: I-Chatroulette ivuliwe kwenye ifestile / isiphequluli, kwaye sifuna iiphequluli ezimbini kunye neeakhawunti ezimbini (vk / fb)
Ukuba awunayo i-akhawunti okanye awufuni ukufumana ukuvinjelwa kweyona nto iphambili, ngoko ndikucebisa ukubauthenge inombolo, uthenge amanani, kwaye udale iifake ezimbini - oku kuyimfuneko!Ugunyaziso kwi-chatroulette kuphela ngeVKontakte okanye kuFacebook
Ewe, kubonakala ngathi amanqanaba anzimaadlulile: Lixesha lokuseta ii-obs kwiziphequluli zethu, ukunyathela kwi-chatroulette: Vula i-obs yethu kwaye wenze indawo yesikhangeli sokuqala kwikholamu yendawo (masithi igama lomkhangeli wokuqala, umzekelo. , kanye apho kwikholamu yesigcawu, cofa kwindawo eyenziweyo -> izihluzi -> ikhamera ebonakalayo -> khetha ikhamera yokuqala, ungalibali ukucinezela ukuqala!Kungenjalo, kwisikhangeli sokuqala kwi-roulette yengxoxo kwikhamera yokuqala. akuyi kubakho nto ngaphandle kwefestile yokuqala ye-roulette yengxoxo ngokwayo.
Biza iikhamera kwizihluzi ngamagama azo afanelekileyoukuze ungabhideki ukuba yintoni kwaye phi: Umzekelo(ikhamera ebonakalayo ye-1 chrome)ngoku kwifestile yemvelaphi ye-OBS yethu yokuqala esungulwe kufuneka ukhethe ukubanjwa kwefestile (siya kubamba iwindow 1). yebrowser yethu kunye ne-roulette yethu yokuncokola.
Ezinye iithebhu kufuneka zivaliwe ukuze ukugqithisa kungangeni emoyeni.Emva kokuseta imithombo kunye neekhamera, vula i-roulette yengxoxo (Ngena nge-akhawunti ye-VK / FB) khetha ikhamera yethu yokuqala kwifestile yokukhetha i-roulette yengxoxo - njengoko yasungulwa kwi-OBS yethu yokuqala Makhe sijonge into esinayo.
Kuyimfuneko ukubamba ifestile nge-chat-roulette!ezinye iithebhu zinokucwangciswa ukuba azivalwanga
Ngoku kwi-obs yokuqala kwifestile yemithombo, kufuneka sinqande (isityalo) ukwenzela ukuba kwi-browser yethu yokuqala kunye nekhamera yokuqala evuliwe, kukho enye kuphela i-gray chat-roulette square ngaphandle kokulawula.Apha kufuneka uqaphele kwaye uqinisekise ukuba akukho migca emnyama ephumayo, ngaphandle koko i-prank yethu iya kutshisa.
Apha, zonke iisetingi zokunqampuna zixhomekeke kwindlela ozibeka ngayo izikhangeli ezimbini enye kwenye.
Ngoku sibona umfanekiso wethu ngokuchanekileyo!kufuneka yolulwe ngononophelo, kodwa hayi ngobunzima benkqubo yesikrini ye-OBS, kodwa ukuze singalali nale khamera, oko kukuthi, ukuze i-roulette yengxoxo ibe nesikwere sazo ezingwevu ngaphandle kwemivalo emnyama ejikeleze imiphetho.
Kwakhona kwizicwangciso xa unqampuna -> kufuneka wenze utshintsho -> flip ngokuthe tye ukuba awukwenzi, kuya kubakho uhlobo oluthile lwesipili kwaye oku kuya kusinika i-100%
Ukuba wenze njengoko ndikubhalela apha: Emva koko kuya kufuneka ufumane into efana neskrini sam.
I-Lifehack xa unweba umfanekiso kwi-obs,ukuba ubambe iqhosha le-Shift, ngoko ulula kancinci, kwaye ngokubamba i-alt kunye nokwelula, uya kutyala isakhelo ngaphandle kokwelula umfanekiso.Ngeli qhinga, unokuzama ukususa ukugqithisa kwisakhelo.Kwakhona, qaphela xa ulula, zama ukwenza kube lula ukwenzela ukuba umntu okwisakhelo angabikho kakhulu kwaye angabikho kakhulu, njengokuba kunjalo, intsingiselo yegolide.
EYONA NTO IBALULEKILEYO!kuzo zombini ii-obs, sikwafuna ukuseta omnye umthombo, nokuba yikhamera yewebhu yokwenyani okanye ividiyo, okanye uhlobo oluthile lwesikhalo kunye nokuseta indawo yokutshintsha ukuze yenzeke ngoko nangoko.
Kufuneka siphinde amanyathelo afanayo kwi-browser yesibini nakwi-obs yesibini njengakwiyokuqala, kuphela ngokukhetha ikhamera yesibini ye-obs esele ikwindawo.Ke, sifezekisa ukuhanjiswa kwabangeneleli!Ngubani oya kucinga ukuba babetha umntu ngengozi, kodwa ngokwenene ulawula ukutshintshwa kwe-interlocutors.Imfihlakalo enjalo :)
Kubonakala ngathi sele senze yonke into, kodwa kukho enye enkulu kodwa!abangeneleli bethu abayi kuva omnye komnye, kwaye ngenxa yezi njongo sifuna iinkqubo ezinje: Imitha yezwi VoiceMeeter kunye ne-VoiceMeeter Virtual Cable ngaphandle kwezi nkqubo, abangeneleli bethu abayi kuvana nangayiphi na indlela.
Khuphela kwaye ufake iinkqubo zethu, ubanike ukufikelela: kwaye uqhubeke useto lwesandi.Kuyimfuneko ukukhetha imakrofoni yethu kwindawo enye(ukuze singenelele nangaliphi na ixesha kwincoko)Musa ukulibala ukuvula i-voice miter imput kwiphaneli yokulawula isandi, ngaphandle koko nangemva kokusetha isandi asiyi kusebenza.
Sivula iprogram ye-Voicemeeter ye-microphone: kwi-parameter yokuqala sibeka imakrofoni yethu, kwaye okwesibini kwi-A1 - izithethi zakho kwi-A2 - KS: i-VB-audio Point, yiyo yonke isandi kufuneka sisebenze kuzo zonke i-interlocutors ezimbini kuquka nawe.
Izinto zincinci: Njengoko ndibhale ngasentla, kuya kufuneka ulungiselele omnye umboniso apho ikhamera yewebhu yokwenyani iya kuvuleka okanye enye into, umzekelo, umntu okhwazayo, qaphela - abakhwazayo kuba ayingabo bonke abantu abanentliziyo eyomeleleyo.
Ungalibali kwakhona ukuseta indawo yokutshintshela kwi-hotkeys ukwenzela ukuba amaxhoba ethu angabonakaliyo angathandabuzi ukuba oku luhlobo oluthile lwe-mysticism :) Ukucwangcisa kwenziwa kwii-hotkeys.
I- Chatroulettengumphathi wasimahla wokuhlangana kwi-Intanethi nabantu ongabaziyo kunye nabahlobo.Ayifuni ukubhaliswa, emva kokufakwa, unokuxhuma ngokukhawuleza kwi-interlocutor.
I-roulette yengxoxo yevidiyo yafumana ukuthandwa kwayo njengokuzonwabisa, kodwa inkonzo yentlalontle ngokwendalo.Bobabini abantu baseRashiya kunye nabahlali abaye bahamba phesheya ngamaxesha beza apha befuna iqabane lomphefumlo, ngoko ke i-roulette yokuxoxa ityelelwa ngabantu abangaphezu kwama-200 amawaka yonke imihla kwaye amanani ayaqhubeka ekhula.
I-Chatruletka ye-Android lunxibelelwano olungaziwayo nabantu ongasoze udibane nabo ebomini bokwenyani.Le ndlela ayibathwali mthwalo abasebenzisi nangantoni na kwaye ayinyanzelisi naziphi na izibophelelo.
Iimpawu ze-Chatroulette app:
onke amazwe ehlabathi;
abantu abaninzi abanomdla;
Ngomsebenzi opheleleyo, kuyimfuneko ukunika isicelo ukufikelela kwidatha eceliwe.Ngaphantsi kwefestile yevidiyo kukho incoko yombhalo, oko kukuthi, awukwazi ukuthetha kuphela kwi-microphone, kodwa uhambelana ne-interlocutor.IiWindows zinokutshintshwa kwaye zenziwe ngokutsha.
Inkonzo ye-Chatroulette eyaziwayo ikulungele ngenxa yokungaziwa, ukuba unqwenela, unokutshintsha ilizwe lokuhlala kunye nommandla wokukhangela.Nabani na unokuziva ekhululekile kwingxoxo.Kuhlala kumnandi ukuchitha ixesha apha.
Kubasebenzisi abanomdla, unokuza nomfanekiso oqaqambileyo okanye wabelane ngokuzonwabisa kwakho nabanye, abanye bathanda ukucwangcisa imidaniso okanye imibhiyozo enengxolo ye-intanethi.
I-Chatroulette ye-Android yindawo onokuthi uphumle kuyo kwaye ube nexesha elimnandi, ufumane iqabane lakho lomphefumlo, okanye iqabane lomphefumlo.Isicelo sinokusetyenziswa kuphela ngabantwana ngemvume yabazali, okanye ngolawulo lwabazali.
Ukufakelai-Chatruletkakufuneka ukhupheleesi sicelo
Unakho ukukhuphela Chat Roulette Androidfor free in Russian ngezantsi ngekhonkco ngqo.